Share yethu team kini Call fresh and olusha of Duty: Black Ops III Keygen 2015 … We anqume ukwakha le Call of D ...
Sethula kuwe Yempi amasha futhi zilungiswe 4 Generator Key ....
Umlotha Singularity CD Key Generator
Thwebula Ashes yakamuva ye Singularity umkhiqizo cd generator key and zikhiphe siqu ukusebenza khulula cd ukhiye wakho ....
Thwebula Emergency zakamuva 2016 umkhiqizo cd generator key and zikhiphe siqu ukusebenza khulula cd ukhiye wakho ....
Sword Coast Legends Khulula CD Key Generator
Thwebula Sword Coast Legends cd generator key ithuluzi futhi zikhiphe siqu cd khulula ukhiye wakho ....
abadlala Siyakwamukela, this universal game key generator is a tool that has the power to generate free game code for almost eve...
Wethule wena Call entsha Of Umsebenzi izipoki Key ugesi. Le generator key usebenza nge-PC, Xbox and PSN ...
Advanced Warfare Thwebula (No Torrent)
Free thwebula Call of Duty Advanced Warfare game.. Sethula kuwe entsha futhi olusha Call of Duty Advanced Warfare f ...
Posted in Game Izibuyekezo	2016-11-28
Izinja ezigadayo 2 ngoba PC umlandeli ukuba elivulekile izwe action video game Watch Dogs (2014). In the initial video game, Gamer okwanikezwa ithuba ukuze bagcina hacker onolwazi ilawula izakhiwo kamasipala kanye nokuxhumana amagajethi ehlukahlukene, sisebenzisa iqoqo moden-day gizmos. Ukufakwa 2nd ngokufanayo ezivezwa studios Ubisoft kwangaphakathi okuholwa yiSonto Ubisoft Montreal – leli qembu ngemuva ukukhiqizwa ezifana franchise othandwayo Far Cry, Creed Assassin sika, Prince of Persia, Izwibela Cell Tom Clancy noma ukufaka yamuva nje Tom Clancy sika Rainbow Six chungechunge.
Ngokungafani imvelo ububi besimo kanye lifiphele ye ukufakwa sokuqala ngqa, Izinja ezigadayo 2 inikeza Gamer nge inqubo unwinded more formula a nokugenca-themed evulekile-world video game. Isenzo is embeded edolobheni ngokuphelele brand-new, okuyinto San Francisco ngalesi sikhathi. I Gamer ogabadela umsebenzi Marcus Holloway, Nokho impela lokho kubalulekile ngempela ukuthi ukuyiphi Dedsec– umcimbi iqembu kubaduni zesifunda. Amalungu Dedsec babelana umgomo, okuyinto ukonakalisa Central Isistimu, basuke futhi wagxila nje ujabulela yabo “Umsebenzi”. Ngakho Watch Dogs 2 isebenzisa i imvelo okusho kakhulu unwinded ezingaphezu kuka ncamashi nalokho okungabizwa wazizwa kanjani lapho udlala kokuqala video game– a umphindiseli lokuphila elibuhlungu kwaba lens okuyothi ngalo izwe virtual kwakubhekwa.
Ngokuvamile, Izinja ezigadayo 2 for PC / Windows akusho basembusweni kude le formula Gameplay of the initial Watch Dogs. Njengoba i umphumela, kuba waphinda elivulekile izwe, third-umuntu action video game okuyinto ifana edumile Grand Theft Auto series Mayelana Mechanics. I-Watch Dogs uchungechunge umahluko ngokwayo ngokunikeza Gamer ithuba Hack izindawo inhlanganisela yezimpawu ezibanzi ngempela gizmos– Izinja ezigadayo 2 ngokuqinisekile kuletha i extension ukuze lesi sakhi Gameplay. I Gamer angakwazi ukulawula lorries, kanye nezinye izinto eziphilayo nasendaweni ezizungezile ngokususa in ububanzi izindlela. Ngaphandle kwalokhu, Gamer angafeza okubizwa ngokuthi mass-hacks, wakuvumela ukuthatha okulawula ezihlukahlukene zobuchwepheshe ngesikhathi esiqondile esifanayo (Ngokwesibonelo, mobile phones ngezinyawo).
Marcus Holloway sesinesethi gizmos brand-new ngokuphelele Sihlome ngesikhali, njengomshini Drone ezindizayo, i RC izimoto kanye iloli noma isikhali kukhiqizwa sisebenzisa iphrinta 3D. The developers zase bagxila ekwenzeni inkululeko ngaphezulu amasu Gamer, ngubani baqede okwalandela izinhloso indaba amasu, kuye izinqumo zabo (for example, sikhukhuleke noma kuncishiswe imiphumela labamelene empini evulekile). Kokubili physics ngumnikazi nokunakekela indlela abaholayo uhlamvu relocations ithuthukiswa. Kulo mBhalo, ewufanele wayebonisa ukuthi Marcus Holloway kuyinto abanekhono freerunning practicioner.
In Watch Dogs 2 for PC / Windows, umsebenzi esibucayi ngempela olunzulu, single-player project ukuhlinzeka neqoqo elikhulu side-imisebenzi ngaphandle kwe- izinhloso indaba ezisekelwe. Umdlalo ividiyo akusho ungenalo nakho yabadlali abaningi, okuyinto ifakwe imodi solo, ngokuhambisana amaphetheni entsha. Ngenxa yalesi, Gamer njalo ayithole in touch oshomi zabo, ngisho nalapho uyajabula the mode indaba. Ngakho kungaba iqhaza washo ohlangothini-imisebenzi, ezimbalwa zazo yilezi ukubambisana-ngamakhasimende, noma labo wakuvumela izimbangi yabadlali.
Intel Core i5 3470 3.2 GHz / AMD FX 8120 3.9 GHz,
ikhadi graphic 4 GB GeForce 970 / Radeon R9 290 noma kangcono,
Amawindi 7(SP1)/8.1/10 64-bit
Intel Core i5 2400S 2.5 GHz / AMD FX 6120 3.5 GHz,
ikhadi graphic 2 GB GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870 noma kangcono,